फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - कार र सरकार
कार र सरकार विमल निभा
विकसित मुलुकहरू कारको मोडल चेन्ज गरिरहन्छन् भने हामी सरकारको। अब कार र सरकारमा के सम्बन्ध छ, मलाई थाहा छैन। हो, उच्चारण ध्वनिमा थोरै साम्यता अवश्य छ । पुछारतिर । (कार र सरकार) । यतिकैको भरमा कारमा सरकार अथवा सरकारमा कारलाई मिलान गरेर केही भन्न मिल्छ त ?
संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जर्मन, बेलायत, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, स्वीडेन, स्पेन, फ्रान्स, इटाली, निदरल्यान्ड, पोर्तुगाल, जापान आदि मुलुकमा विभिन्न मोडलका कार धुमधामले निर्मित भइरहन्छन् । म त्यति टाढा नगएर हाम्रै छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानको कारतिर जान्छु । त्यहाँ पनि भाँती–भाँतीका कार बन्ने गर्छन् । मलाई हिन्दुस्तानी कारहरूका नाम उतिसारो भन्न आउँदैन । कृपया क्षमा गर्नाेस् । मेरा कतिपय राजनीतिक मित्रहरू भने फरर कारहरूका नाम मलाई सुनाउने गर्छन् । मेरो कुनै पनि किसिमका कारमा अभिरुचि नभएकोले म केही भन्ने गर्दिन। धेरैजसो चुप नै रहन्छु ।
अँ, एउटा हिन्दुस्तानी कारको नाम भने मेरो सम्झनाको फेदमा कुन्नि कसरी अड्किएको छ ! भारतीय मारुती कम्पनीको कार । हिन्दुस्तानमा भारतीय कंग्रेस पार्टी सरकारमा छँदा मारुती कार अतिशय चर्चामा थियो। खास गरेर स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीको समयमा । उनको कनिष्ठ पुत्र असाध्यै पावरफुल ठानिएका सञ्जय गान्धीको सम्पूर्ण स्वामित्वमा रहेको मारुती कारको चर्चा कतिसम्म थियो भने कार र सरकारमा कुनै पनि खालको भेद गर्नु असम्भवप्राय थियो । यसर्थ कार र सरकारमा कुनै पनि साइनो हँुदैन भन्न गाह्रो छ । जे होस्, यहाँ म कारको नभएर सरकारको कुरा गर्न अघि सरेको हुँ ।
याने नेपाल सरकारको । हिन्दुस्तानी कार त प्रसंगवश अघि आएको मात्र हो। अहिले त हिन्दुस्तानमा मारुती कारको सरकार कायम रहेको पनि छैन । त्यहाँ भारतीय कंग्रेस पार्टीको स्थानमा भारतीय जनता पार्टीको नरेन्द्र मोदी सरकार बलियोगरी स्थापित रहेको छ । तर रमाइलो के छ भने कारको मामलामा नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी सरकार पनि भारतीय कंग्रेसी सरकारकै रेडिमेड पथमा अग्रसर छ । दुवैमा कुनै खास भिन्नता देखिँंदैन। मेरो मतलव, कार अर्थात् सरोकार। वस्तुत यो कुनै तुकबन्दी नभएर हिन्दुस्तानी सरकारको नेपाल सरकारसँगको बेमतलव सरोकारको कुरा हो। (यसको सिलसिलेवार चर्चा तल हुनेछ) ।
कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको वर्तमान सरकार परिवर्तनको हलुका–हलुका हल्ला अघिल्लो दिनसम्म चलिरहेको थियो । एक बिहान यसलाई एउटा ठोस आकार प्रदान गर्न यो सरकारको अर्काे मुख्य घटक एनेकपा माओवादीका चञ्चल अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो विदेशी कारमा सवार भएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगे ।
के कामले आउनुभएको हो कमरेड ? प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीले सशंकित मुद्रामा सोधे ।
के म यहाँ आउन सक्दिन कमरेड ? कमरेड प्रचण्डको चिढिएको वाणी थियो ।
होइन—होइन, कमरेड यहाँ जुनसुकै बखत पनि आरामले आउन–जान सक्नुहुन्छ । कमरेड प्रधानमन्त्री ओली हडबडाए, तर कुनै काम होला नि कमरेड ?
म सरकारको काममा आएको हुँ कमरेड ।
कस्तो सरकारको काम ? कमरेड प्रधानमन्त्री ओली थप अशंकित भए ।
अब तपाईसँग मैले के लुकाउने कमरेड ? कमरेड प्रचण्ड उत्तरित भए, वास्तवमा म सरकार परिवर्तनको सिलसिलामा आएको हुँ ।
सरकार परिवर्तन गर्ने बेला भयो र ? कमरेड प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहार अँध्यारो भयो ।
हामीले गरे भने नहुने के छ ? कमरेड ? कमरेड प्रचण्डले दार्शनिक भाषाको प्रयोग गरे ।
केही समय अझ पर्खिन सकिँंदैन कमरेड ?
(यो संवाद जारी छ ।)
दुवै कमरेडहरूका संवाद काल्पनिक जस्तो लागे तापनि यही हालको यथार्थ हो। किनभने कमरेडद्वय खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारी कार चलाउने उत्कट अभिलाषासहित संवादरत भएका हुन् । कमरेड प्रधानमन्त्री ओली त पहिलेदेखि नै सरकारी कारमा सवार नै छन्। अब उप्रान्त कमरेड प्रचण्डको पनि सरकारी कारमा चढ्ने लालसा एकाएक पलाएको छ । यो एकाएक नहुन पनि सक्छ। यसबीच नेपथ्यमा विद्यमान ‘विदेशी प्रभु’ (कमरेड प्रचण्डकै पेटेन्ट भाषाबाट सापटी लिएर) ले अरुको मामलामा अनावश्यक सरोकार राख्ने आफ्नो चिरपरिचित बानी बमोजिम के गर्यो अथवा गरेन, यो हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन । म धेरै के भनुँ ? यस क्रममा कमरेड प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो सरकारी कार अर्थात सरकार मजाले चलाइरहन हिन्दुस्तानी पेट्रोलको धुइँपताल खोजी गरे कुनै आश्चर्यको विषय हुने छैन ।
आजको ताजा समाचार मुताविक एकाएक (एउटा अर्काे एकाएक) सरकार परिवर्तन स्थगन भएको छ । यसको अर्थ के हो भने केही समयका लागि कमरेड प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नै सरकारी कारमा सुविस्ताका साथ सवार भइरहनेछन् । तत्पश्चात सरकार अर्थात सरकारी कारमा चढ्ने कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालो आउनेछ । अतएव दुवै कमरेडलाई मेरो हार्दिक बधाई !
कान्तिपुर, वैशाख २५, २०७३
मन्त्री सांसदका काम
गुहार ! गुहार ! जय – पुरस्कार !
ढिंडो र चाउचाउ चिन्तन
मिसावटीवाद मुर्दावाद !
जय — श्वेतपत्र !